I-Grand Erotic Massage • I-Body Rub ne-NuRu Massage
I-Grand Erotic Massage
Lapho u-oda ukukhishwa kwe-outcall services yokuphelezela eJapane, kubaluleke kakhulu kuwe ukuthi ubheke ukuthi ihhotela ohlala kulo livumela izivakashi zabo ukuthi zimeme omunye umuntu egumbini labo.
Ngokuvamile, amahhotela okunethezeka nawamabhizinisi, abiza ngaphezu kuka- $ 200 ukuhlala ubusuku bonke, ngokuthula avumela izivakashi zabo ukuthi zisebenzise izinsizakalo zokuphelezela egumbini.
Uma uhlala ehhotela lesabelomali, kufanele uqaphele, ngoba kunamahhotela amaningi esabelomali anqabela izivakashi zawo ekwenzeni izinto ezinjalo. Kuya ngamahhotela, ngakho-ke ngicela ubuze ukuthi uyafuna yini ukwazi ukusebenzisa ihhotela lakho.
Amahhotela othando awuhlobo lwamahhotela enzelwe ezocansi kanye nezinye izinto ezingamukeleki. Ngakho-ke, ayikho inkinga ngokuthokozela ukubhucungwa kokukhishwa lapho.
Uma ungazange uthathe isinqumo sokuthi uzohlala kuphi, futhi ufuna ukusebenzisa i-salon yethu, ukuhlala ehhotela lothando kungaba enye yezinketho.
* Amakhasimende kufanele abe neminyaka engu-18 noma ngaphezulu.
Ukulethwa Kwezitayela ZaseTokyo